Maleeshiyaad hubeysan oo hal goob ku dilay dad isku qoys ah - Wardeeq 24 TV Maleeshiyaad hubeysan oo hal goob ku dilay dad isku qoys ah Wardeeq 24 TV
Home Warar-ka Maleeshiyaad hubeysan oo hal goob ku dilay dad isku qoys ah
Maleeshiyaad hubeysan oo hal goob ku dilay dad isku qoys ah
Wararka aan ka heleyno degaanka qabalaha garasle oo hoostaga degmada Shilaabo ee dawlad deeganka Soomaalida ayaa sheegaya in maleeshiyaad hubeysan ay hal goob ku toogteen dad isku qoys ahaa oo ku sugnaa Gurigooda.
Maleeshiyaadka hubeysan ayaa rasaas ku furay dadkaas, waxaana halkaasi ku geeriyooday Hooyo, laba Carruur ah oo ay dhashay iyo Adeerkood, waxaana dhacdadaasi lala xiriirinayaa aanooyin qabiil oo bilihii la soo dhaafay ka taagneyd degaano ka tirsan dowlad degaanka Soomaalida.
Warraka la helayo ayaa sheegaya in Maydadka afarta ruux la keenay degmada Balanballe ee Gobolka Galgaduud oo degaan ahaan ay kasoo jeedaan, iyada oo la filayo in Maanta Gelinka hore la Aaso meydadka dadkaas.
Sidoo kale dadka degaanka Qabalaha ee falka uu ka dhacaya ayaa sheegaya in la la’yahay Cunug yar oo kamid ahaa Carruurta Qoyska, kaas oo ku sugnaa Goobta uu weerarka ka dhacay.
Degaano ka tirsan dowlad degaanka Soomaalida ayaa snadihii la soo dhaafay waxaa ka taagnaa Colaad Beeleedyo salka ku haayo dhul la isku heysto, waxaana dagaalka ugu daran uu dhexmaray Soomaalida iyo Qowmiyada Canfarta Itoobiya. https://wardeeqnews.com/
Previous articleBanaanbax looga soo horjeeday Farmaajo oo ka dhacay Muqdisho
Next articleProf. Xuseen Warsame oo xog dheeri ah ka bixiyey dhaqaalaha laga jartay DF